February 22, 2012ဥက္ကာကိုကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၂
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:သရော်စာ, သောင်းပြောင်းထွေလာ	4 Responses to အိုဘားမား လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း Mon on February 22, 2012 at 11:46 am Great satirical writing except using dead people like Kadafi and Kim Jong Ii.
glass on February 22, 2012 at 2:54 pm Guinness (The Guinness Book of World Records) နဲ့ Greenwich အသံထွက်မှားရေးထားတာကလွဲရင် ဖတ်လို့တော်တော်ကောင်းပါသည်..။
ဇတ်ဆ၇ာ on February 22, 2012 at 3:04 pm ကောင်းလိုက်တဲ့ အေ၇းအသား…စာေ၇းဆ၇ာကြီး အီကြာကွေးကို…အ၇မ်းသတိ၇မိပါသည်…ဥက္ကာကိုကို
thanhtikephyomaung on February 26, 2012 at 9:24 am ကောင်းပါ့ ဆရာရေ့ စက်သာရေး အားပေးနေပါတယ်
ဗိုလ်ထက်မင်း - ကိုးကန့် MNDAA စခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၁)	အောင်ဝေး -ဒေါ်အောင် ဆ န်းစု ကြ ည် သို့ေ ချ ပ ချ က်	ဆောင်းလူ - သူမနှင့် ဘ၀ ...	ဆောင်းလူ - အပြာကား	ဖိုးထက် - လူပါးဝသော စာအုပ်	ကာတွန်းအောင်မော် - သူတို့အထက်ရဲ့ အထက်က ကောင်	ကာတွန်း ATH - ဟောက်သံထွက်ပေါ် တို့လွှတ်တော်	ကိုသစ် (သီတဂူ) - ရေသန့်၊ လူသန့်၊ စိတ်မသန့်တသန့်	ဖိုးစီ (ရုံးတော) - မင်းစဉ် မင်းဆက် ယတြာ ကွက်များ	မြဒေါင်းနွယ် - သူမ၏ ချစ်သူ	မိုးမခ Kindel Store
ရွှေည၀ါဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟ တရားပွဲ။ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ဆန်းဒေး၊ ဖရီးမောင့် နီဝန်း - စင်္ကာပူမှာ … ရှိတယ်
စာပဒေသာ ကောက်စာများအနုံညာတကဗျာ - Zay Hmine